01/08/15 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
မိုးရွာနေတဲ့အချိန် PHONE ကို ဘယ်လိုသတိထားအသုံးပြုသင့်သလဲ
Monday, August 31, 2015 Anonymous No comments
အခုအချိန်အခါက မိုးရာသီရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသဖြင့် Phone အသုံးပြုသူတွေသတိထားပြီး အသုံးပြုရမဲ့အချိန်အခါ
တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျတော့်အနေနဲ့ ရှောင်ရှားသင့်တာလေးကို အကြံပြုပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှမပာုတ်ပါဘူး လူတိုင်းပာာ အခုခေတ်ကြီးမှာအိမ်မှာရှိကြရတာနည်းပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စ ဒါမှမပာုတ် အကြောင်းကိစ္စ
တစ်ခုမပာုတ်တစ်ခုနဲ့ အပြင်ထွက်နေကြရတာများပါတယ်။ အဲလိုအပြင်ထွက်နေရတဲ့အချိန် မိုးရွာလာပြီဆိုရင် ကျတော်တို့ကိုင်ဆောင်လာတဲ့
Phone ကို သေချာဂရုစိုက်ဖို့ဆိုတာ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘာမှထည့်စရာမပါလာရင်တော့ အရင်ဆုံးနီးစပ်တာရေ၀င်နိုင်တာပါပဲ။
ဒါကြောင့် သင်္ကြတွင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ ရေလုံအိပ်လေးဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာသတိထားသင့်
တာလေးပါ။ ဖုန်းပြောတဲ့အချိန် လူတိုင်းပာာဖုန်းလာတာနဲ့ အလွယ်တကူထုတ်ပြီးပြောလိုက်တက်ကြပါတယ်။ မိုးရွာနေတဲ့အချိန်ဆို
ဖုန်းပြောတဲ့အခါဆိုရင် အမိုးအောက်မှာဝင်ပြောစေချင်ပါတယ်။ မိုးကြိုးစက်ကွင်းနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သီချင်းနားထောင်တာလဲ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဆို ဖုန်းကိုလာရောက်ပြီး
အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ လူပါအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ မိုးရွာနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆို ဖုန်းကိုလိုတာထက်ပိုပြီး အသုံးပြုတာမျိုးကိုရျောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အသိပေးချင်တာကတော့ ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ … ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မိုးရွာနေတဲ့အခါ မီးကလဲစိတ်မချရပါဘူး
ခဏခဏပျက်သွားတက်သလို ခဏခဏပြန်ပြန်လာလိုက်နဲ့ မီးအားအတက်အကျကိုလဲသတိထားရမဲ့အချိန်ပါ။ မီးအားအတက်အကျနဲ့
ညှိသွားခဲ့ရင် ပါဝါပိုင်းကိုဒုက္ခဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြန်ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖုန်းကိုမိုးရွာနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆို အထက်ပါအတိုင်းသတိထားအသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာလေး ကျတော်သိသလောက်
ref : Ko Htoo( MMAS )
Cracker Barrel Games app သည် app တစ်မျိုးတည်းတွင် ဂိမ်းငါးမျိုးခန့်ကို ထည့်သွင်းပေးထားသည့် game app တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Solitaire, Peg Game, Checkers, Memory Match, Spot the Difference အစရှိသည့် ဂိမ်းအမျိုးအစား ငါးမျိုးပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ app ကို iTunes တွင် အခမဲ့ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး download ပြုလုပ်ရမည့် ဖိုင်အရွယ်အစားမှာ 95.4 MB ခန့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။ iOS version 7.0 နှင့် အထက်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ဂိမ်း app အမျိုးအစားတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူများအတွက် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
Unit Converter app သည် ငွေကြေးနှင့် အတိုင်းအထွာများ၊ အပူချိန် အစရှိသည်တို့ကို အလွယ်တကူ တွက်ချက်ပေးနိုင်မည့် app တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ app တွင် Basic, Living, Science, Misc ဟူ၍ ခွဲခြား ပေးထားသည်။ Basic အောက်တွင် အလျားအနံ တွက်ချက်ပုံ၊ Area တွက်ချက်ပုံနှင့် အခြားသော အလေးချိန် ချိန်တွယ်ပုံ အစရှိသည်တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားသည်။
Download ပြုလုပ်လိုသူများအနေဖြင့် အခမဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး download ပြုလုပ်ရမည့် ဖိုင်အရွယ်အစားမှာ 3.1 MB ခန့်သာ ရှိမည်ဖြစ်သည်။ Android 2.3 နှင့်အထက်တွင် ထည့်သွင်း အသုံး ပြုနိုင်မည့် app တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူများအတွက် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
Twitch နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် YouTube Gaming ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Google မိတ်ဆက်
Google သည် Amazon မှ ပိုင်ဆိုင်သော Twitch ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန် YouTube Gaming ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Google အနေဖြင့် ဗွီဒီယိုဂိမ်း ဗွီဒိယိုလွှင့်ပေးမည့် YouTube Gaming ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က စတင်ခဲ့ကြောင်း BBC ကဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် app သည် YouTube ပေါ်ရှိ ဂိမ်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများစွာ စုစည်းပေးမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် တစ်နေရာထဲ၌ ဂိမ်းတစ်ခုစီနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗွီဒီယိုနှင့် အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ စုဆောင်းထားသည့် စာမျက်နှာမှ အကြောင်းအရာပေါင်း ၂,၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။ အဆိုပါဆိုက်တွင် ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်ရန် ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အားသာချက်မှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်း feature သည် app သစ်တွင် အဓိကျလာမည် ဖြစ်ကြောင်း YouTube ကပြောကြားထားသည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဂိမ်းသည် အွန်လိုင်းဗွီဒီယို အခန်းကဏ္ဍ၏ အရေးပါဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
YouTube ၏ follow အပြုလုပ်ခံရဆုံး ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သူ PewDiePie သည် အသက်၂၀ ဝန်းကျင်ရှိကာ “Let’s Play” ဟုအမည်ရသော လူသိများသည့်ပုံစံဖြင့် နာမည်ကျော် ဂိမ်းများ ကစားပြလျက်ရှိသည့် ဆွီဒင် gamer တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Twitch သည်လည်း ဂိမ်းဝါသနာရှင်များက တိုက်ရိုက် ဂိမ်းကစားမှုများ ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပွဲစဉ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက် ဘတ်စ်ကားများတွင် အခမဲ့ Wi-Fi အသုံးပြုနိုင်မည်
ဆက်သွယ်ရေး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဘန်ကောက်မြို့တွင် ပြေးဆွဲနေသော အများသုံး အဲကွန်းဘတ်စ်ကားများတွင် ကြော်ငြာပါဝင်သော အခမဲ့ WiFi ဝန်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် Pan B Media ထံ လိုင်စင်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လိုင်စင်ကို National Broadcasting နှင့် Telecommunications Commission ၏ ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့က သောကြာနေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Plan B Media သည် ၁၅ မိနစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ၁၀ စက္ကန့်စာ ကြော်ငြာပြသမည့် အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် Bangkok Mass Transit Authority နှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။
သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင် Wi-Fi ကို ဖွင့်ရုံဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Wi-Fi ချိတ်ဆက်ပြီးသည့်အခါတွင် ၎င်းတို့၏ ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် မွေးနေ့တို့ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် SMS ဖြင့် password တစ်ခုကို လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။
အခမဲ့ Wi-Fi ပထမဦးဆုံး ရရှိမည့် ဘတ်စ်ကားလိုင်းများမှာ 39, 510, 520, 555, 26, 60, 514, 511, 36, 73, 16, 503, 23, 70, 79, 515 နှင့် 556 တို့ ဖြစ်သည်။
Ref: Bangkok Post/Richard Barrow
မြန်မာငွေပေးချေရေးအဖွဲ့က အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် သုံးစွဲမှုကို ဗဟိုဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး Online စနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်သွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် က ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်သည့် အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် (Credit Card) သုံးစွဲမှုကို Online ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် စနစ်ကျသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုများဖြင့် ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာငွေပေးချေရေးအဖွဲ့ (MPU-Myanmar Payment Union) မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းအချို့ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်များ ကို အခြေခံပြီး အကြွေးဝယ် ကတ် သုံးစွဲမှုကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟို ဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်လုပ်ငန်း များ ပူးပေါင်း၍ စီမံခန့်ခွဲသွား မည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် ပြည်တွင်းဘဏ် လုပ်ငန်းအချို့ ပြိုလဲခဲ့သည့် အချိန်ကာလ အတွင်းက အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အမည်မည်းစာရင်း မှတ်တမ်းရှိခဲ့သူများ အားလည်း အဆိုပါ ကတ်များအား ပြန်လည်သုံးစွဲခွင့်ပေးမည့် ယခု တစ်ကြိမ်တွင် စိစစ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း အထက်ပါတာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
“၂၀၀၃ ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းအချို့ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရတာကို သင်ခန်းစာယူပြီး ဒီတစ်ကြိမ်မှာ စနစ်တကျနဲ့ လုပ်ပေးသွားမယ်။ အရင်တစ်ခေါက်က black list အသွင်း ခံထားရသူတွေကို သေသေချာချာ ဆန်းစစ်သွားမယ်။ အဓိကကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက်က အတွေ့အကြုံကို အခြေခံပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုကို သေချာလုပ်ရမယ်။ ကတ်သုံးစွဲမှုကို စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်ရမယ်” ဟု အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များ၏ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ်များ အသုံး ပြုခွင့်ရရှိရန် တင်ပြချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ပြီးခဲ့သည့် လအနည်းကမှ ခွင့်ပြုပေး လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ပြည်တွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း အချို့ ပြိုလဲမှုဖြစ် ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခွင့် ရရှိ ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုလက်ရှိတွင် MPU အဖွဲ့ဝင် ဘဏ်လုပ်ငန်း ၂၀ အနက် ၁၅ ဘဏ်သည် အဆိုပါ အကြွေး ဝယ် ကတ်ထုတ်ဝေခွင့်ကို ရရှိထားပြီ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဇဘဏ်သည်ယင်း ကတ်သုံးစွဲမှုကို စတင်လုပ်ဆောင် ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Apple သည် စက်တင်ဘာလတွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၌ ကျင်းပမည့် ပွဲတွင် iPhone 6s နှင့် iPhone 6s Plus တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် iPhone 5c ရောင်းချမှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် စီစဉ်နေကြောင်း 9to5Mac မှ ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းဌာန၏ အဆိုအရ Apple သည် ၄ လက်မ screen ပါဝင်သော စမတ်ဖုန်းသစ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ၎င်းကို ယခုနှစ်တွင် တင်ပို့ရောင်းချရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Apple သည် ၄.၇ လက်မနှင့် ၅.၅ လက်မ screen အသီးသီးပါဝင်သော iPhone6နှင့် iPhone6Plus တို့ကို မတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ယခင် iPhone 5s တွင်မူ ၄ လက်မ display ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
iPhone 5c ရောင်းချမှုကို ရပ်ဆိုင်းရခြင်းမှာ နှေးကွေးသော ပရိုဆက်ဆာကဲ့သို့သော feature အဟောင်းများနှင့် ရောင်းအားနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း 9to5Mac မှ ဆိုခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် Apple ပွဲတွင် နောက်ဆုံးပေါ် iPhone နှင့်အတူ အဆင့်မြှင့်ထားသော Apple TV set-top box တို့ကို မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။
iPhone 6s တွင် Apple Watch ကဲ့သို့သော animated background များ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိ
အသစ်ထွက်ပေါ်လာသော သတင်းများအရ Apple သည် iPhone 6s နှင့် iPhone 6s Plus တွင် Apple Watch ၌ အသုံးပြုထားသော ဆန်းသစ်လှပသည့် animated wallpaper များကို ထည့်သွင်းရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
Apple Watch သုံးစွဲသူများသည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသော ရေခူ၊ လိပ်ပြာများနှင့် ပန်းပွင့်များကို background အနေဖြင့် ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး iPhone သစ်တွင် ပါဝင်မည့် wallpaper များတွင် ရွှေငါးကြင်း၊ ပန်းပွင့်များနျှင့် အရောင်အသွေးစုံလင်သော မီးခိုးမှုန်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း 9to5Mac မှ ဖော်ပြခဲ့သည်။
cnBeta ဟုခေါ်သော တရုတ်ဆိုက်တွင်မူ ရွှေရောင်နှင့် အနက်ရောင် ရွှေငါးကြင်းပုံ ပါဝင်သော iPhone 6s Plus ဘူး၏ ဓာတ်ပုံ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
iPhone 6s နှင့် 6s Plus တွင် 4K ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနိုင်သော 12MP ကင်မရာသစ် ပါဝင်လာဖွယ်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်ကင်မရာက 1080p ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းဖုန်းသစ်များတွင် သုံးစွဲသူ၏ screen ပေါ် ဖိနှိပ်သည့်အားကို သိရှိကာ ကွဲပြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်နိုင်စေမည့် Force Touch နည်းပညာ ပါဝင်လာဖွယ်ရှိကြောင်း၊ အဆိုပါ နည်းပညာသည် သုံးစွဲသူများအား menu များရှိ option များကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ရှာဖွေစေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လတ်တလော ပျံ့နှံ့နေသည့် ကောလာဟလ သတင်းများတွင်မူ iPhone သစ်များကို ပန်းရောင်သမ်းသော ရွှေရောင် (rose-gold) ဖြင့် မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
Vodafone ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ အီးမေးလ် ပေါက်ကြားချက်အရမူ Apple ဟန်းဆက်သစ်များကို စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်တွင် စတင်ရောင်းချမည်ဟု သိရသည်။
♪ ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်သင်တော်တဲ့ Battery Saver Pro v2.1.7 Apk (27-Aug) ♫
Monday, August 31, 2015 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
ဖုန်းတစ်လုံးမှာတော့ အနည်းဆုံး Battery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Application တစ်ခုခုတော့ ရှိကိုရှိထားသင့်ပါ တယ်ဗျာ။ အခုလည်း Battery Saver Pro v2.1.7 Version အသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သိပ်ပြီးတော့ မကွာခြားလှပါဘူး။ စတိုင်လေးတွေပဲ ကွာသွားကြတာပါ။ နောက်ပြီးဒီကောင်လေးမှာပါတဲ့ One-Tap Optimizer လေးကိုတော့ တော်တော်လေး ကိုသဘောကျလို့တင်ပေးဖြစ်တာပါ။ Tab တစ်ချက်ထဲနဲ့ နောက်ကွယ်က Run နေတဲ့ Application တွေကို ပိတ်ပေးနိုင်တာပါ။ Ram ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Widget ထဲမှာလည်း Function များစုံလင်စွာပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့အသုံးပြု လို့ကောင်းတဲ့ Battery Apk တစ်ခုဖြစ်လို့ဒေါင်းယူထားလိုက်ပါဦးဗျာ။
♪ သီချင်နားထောင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး - jetAudio Music Player+EQ Plus v6.1.0 Patched (29-Aug) Apk
သီချင်းနားထောင်ရသာဝါသနာပါသူများအတွက် Android Phone မှာ သီချင်တွေကိုနားထောင်နိုင်ဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး Player တွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ JetAudio Player လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ။ Jet Audio Player ကတော့ PC မှာကတည်းက နာမည်ကြီးပြီးလူသုံးများတဲ့ Player ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Android Version မှာထွက်လာတဲ့ Player ကိုလေ့လာကြည့်ရသလောက်တော့ သူ့မှာ Audio အတွက် Feature အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ အသံတွေကို မိမိလိုသလိုချိန်ညှိနိုင်မယ့် Equalizer လည်းပါဝင်ပါတယ်။ အချို့သော သီချင်းတွေမှာအသံတွေတိုးနေလို့ နားထောင်ဖို့အဆင်မပြေ ရင်လည်း အခု JetAudio Player နဲ့ အသံကိုမြှင့် တင်ပြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပြေ နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ File Type ကတော့ MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD စတာတွေအပြင်အခြားသော Audio Format ပေါင်းများစွာကိုလည်း Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများ မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စက်ရုပ်စစ်ပွဲအက်ရှင်ဂိမ်းလေး - Ironpiercer - Sci fi Bug War APK MOD Unlimited Bullet
Monday, August 31, 2015 ပုသိမ်နည်းပညာ No comments
စက်ရုပ်စစ်ပွဲအက်ရှင်ဂိမ်းလေး - Ironpiercer - Sci fi Bug War APK MOD Unlimited Bullet ဂိမ်းလေးကတော့ ဆော့လိုပကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းပစ်ခက်ဆော့ကစားခြင်
Ironpiercer - Sci fi Bug War Apk Mod Unlimited Bullet,New Update With Version 1.1
- Ironpiercer is one of the top5listed security firms and famous for its uniformed battle scheme.
Their formation usually consist of mechs & tanks carried by dropships.
[Real Life Sun Flare & Dynamic Shadows]
- Shadows of hundreds of crawling bugs or that of 200m tall giant bug casted in front of you are bound to scare something out of you.
Stick together with your comrades' mechs to watch each other's back.
[Cinematic Scores & Full 3D Sound Effects]
- Almost one third of the budget went into the cinematic musics and sound effects.
Please use earphones or headsets to fully immerse yourself and take advantage of 3D sound effects.
Echoing howls of mega sized bugs or sounds of bullets flying by will set just the right settings for you.
(Playing Ironpiercer with or without headset/earphones are completely two different things)
[Maximum 25.000km Visual Distance]
- Special shaders will make terrains look awesome both from far and near and most importantly, fast.
This visual range makes it possible for realistic atmosphere and settings. Your mech's effective shooting range is 270m and it will still feel short.
- Asasergeant, your job is not just about killing bugs or punishing pirates, you are also required to look after your men in your group.
Wheather sending your troops forward, ordering them to hold position or barricading the passage with tanks in your group, they will need you.
Some missions will be smooth sail with the right command, for example, there isamission for you to stop bugs crawling out of massive hole.
In this case, barricading with tanks between you and bug hole will make it easy for you and other mechs. Because bugs are smart but not that smart.
[Playable Cut Scenes]
- Cutscenes are usually presented asathird person view but in Ironpiercer every important moments are given to you asaplayable scene meaning you don't just watch the cutscenes, you play them.
[First Episode : Eugenios]
- This 30 hours long episode features you and Bran Eugenios who were born in Eugenios. (Orphans' lastnames are set with their town's name)
Episode Eugenios is more focused on bugs than pirates. Don't let the pleasant(?) trickery in bootcamp fool you. Episode Eugenios is actuallyasad story.
Prepare tissues or doomed. ;)
- The earth has deprecated and human race has relocated toanew planet : "New Heaven".
200 years later, sudden holes started appearing in plains, deserts, mountains and cities. As native entities finished hibernation and started their hunt. One third of human race disappeared inaweek. Humans welded guns to their construction robots to fight back. Military were establishedamonth later. For 60 years it seemed to hold but it started to rot inside. Orphans either joined military and died before 20 or became pirates.
About half the firms were operating android based and they sometimes killed children hiding in the houses. People wanted security firms with humans and Ironpiercer grew heavily along with the flow and now,
It is one of the top5private security firms in New Heaven.
||Game: Ironpiercer - Sci fi Bug War APK ||
||Market: https://play.google.com/.ironpiercer ||
||Mod: Bullet ||
ဖုန်း Locker အလန်းစားလေး - VLocker apk ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ ဒီဇိုင်းလေးက လန်းလို့ ဘော်ဒါတွေ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အောက်မှာဒေါင်းပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
The smallest screen locker app, only 1M, smaller than smaller
– Quite popular among users of launcher apps
[Unique points] – The smallest – only 1 MB, less storage space occupation, fast, the smallest app .
– The lightest – based on the lightest design philosophy, offers pleasant experience while unlocking.
– The most beautiful – more than 10 themes of different colors for the pattern lock, say goodbye to the boring built-in pattern lock.
– The most convenient – with flashlight, brightness control, ringtone control and commonly-used apps available on the lock screen, save your every second.
– The most considerate – applied with multiple cloud technologies, provide youaprecise weather forecast, farewell to being caught in the rain.
– The safest – pattern lock and digital lock, secure your info and protect your photos from leak. [VLocker’s distinctive functions] – Colorful password – chooseatheme in Password Settings for the pattern lock to color your mobile.
– Handy toolkit – slide screen up in the left bottom to open the flashlight, alarm or commonly-used apps,save your every second.
– Handy camera – slide screen up in the right bottom to open the camera; never missawonderful moment.
– Weather forecast – tap the time or the weather on the lock screen to see the following three days’ weather; remind you to bring your umbrella whenever there isarain.
– DIY color – long press on the time or the weather on the lock screen to set lock screen’s font color; keep every detail of the screen lock in hand. [Notice] – Our promise: we promise we will not collect any of your private data. While authorizing some permission, there may be some privacy prompt. Please follow the instruction of VLocker.
– OS limit: this app only support Android 4.0 or above.
– Permission: Some mobiles may have to be authorized with some permission for the better using of VLocker. [Contact] – We VLocker team pursue the lightest screen locker to make your unlocking colorful and pleasant.
– Your love and support are the best praise and encouragement for us. Please fell free to email us at 2818433219@qq.com. Size : 1.9M
Offered By QQ
ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ Free Call နှင့် Messageတွေပို့မယ် -LINE Lite: Free Messages v1.0.4 Apk
Monday, August 31, 2015 Mr.Win Hlaing No comments
LINE Free Calls & Messages ဆိုရင် ပြောစရာတောင်မလိုလောက်တော့ဖူးလို့ ထင်ပါတယ် ဒီနေ့ ထွက်ထားတာလေးပါ သတိရလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Free Calls တွေမှာ တော့ Viber ပြီးရင် ဒီကောင်လေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲဗျာ။ Video Call ဆိုရင် Screen အပြည့်မြင်ရပြီး ရုပ်သံ ထွက် တအားကြည်လင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကောင်းလေးကတော့ Android OS အားလုံးသုံးနိုင်ပါတယ်။
♪ ဘရွတ်စလီရဲ့ ဖိုက်တင်ကွန်ဖူးဂိမ်း - Bruce Lee Enter The Game v1.2.0 Apk + Data (27-Aug) ♫
Bruce Lee ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဖိုက်တင် မင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် Bruce Lee Game ကိုလည်း သဘောကျခဲ့ဖူးပါ တယ်။ P2 Game ဆိုရင်လည်းနာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း Android User များအတွက် Bruce Lee Fighting Game ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဖိုက်တင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခု လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး အဆင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီမှာ ရန်သူ များနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်တွေအောင်သွား ရင်တော့ ပြိုင်ပွဲ မှာဆုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ APK နဲ့ Data ကို ပေါင်းပြီး တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ဖိုက်တင်ချတာဝါသနာပါ သူများ အကြိုက်တွေ့စေမှာသေချာပါတယ် ဗျာ။ Bruce Lee ရဲ့ ဖိုင်တင်ကွက်ပေါင်း များစွာကို မိမိကိုယ်တိုင် ပဲစမ်းပြီး ထွင်ကစားရမှာပါ။ ရုပ်ထွက်က လည်း တော်တော်လေးသပ်ရပ်ကောင်း မွန်တာကို မြင်တဲ့ အတိုင်းဘဲတွေ့ရမှာပါ။ Android OS 4.1 နှင့် အထက်ဖုန်းများကစပြီး ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်ပါဗျာ။ Install လုပ်နည်းကလည်းလွယ်ပါတယ် အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါနော်။
Copy ‘com.hibernum.brucelee.enterthegame’ Folder to sdcard/Android/obb
နာမည်ကြီး ဖုန်း Locker အလန်းလေး - C Locker Pro v7.4.0.1 Apk
နာမည်ကြီး ဖုန်း Locker အလန်းလေး - C Locker Pro v7.4.0.1 Apk လေးပါ ဗားရှင်းအသစ်လေး
C Locker Pro v7.4.0.1 Apk | 4.4 MB | Resumable Links | Requires : Android 4.1 and up |
Added: Option to select Multiple Location Profiles
Added: Option to set sound mode(silent,vibration,normal) in gesture,volume key,double tap actions
Added: Option to hide notification count as it shows inaccurate count on some apps
Added: Option to hide PIN/Pattern animation when entering codes
Added: Security PIN for Simple Unlock call and camera shortcuts
Fixed: Clock alignment size when no alarm is set
Fixed: Shortcut Sidebar Repositioned to center
မိုးရွာနေတဲ့အချိန် PHONE ကို ဘယ်လိုသတိထားအသုံးပြုသ...
♪ ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်သင်တော်တဲ့ Battery Saver Pro v2...
♪ ဘရွတ်စလီရဲ့ ဖိုက်တင်ကွန်ဖူးဂိမ်း - Bruce Lee Ent...
Exeter 2015 Blueray 480P 490 MB with eng sub
NetGuide, TechSpace, MobileGuide Journal သုံးစုံ A...
ANDROID PHONE များ SCREEN LOCK ( PATTERN / PIN / P...
Isolation 119 webrip 360P 250 MB
Reverse Movie FX PRO – Magic Video v1.3.2 Pro APK ...
Adguard Premium v2.0.62 (Block Ads Without Root) A...
Bruce Lee - Enter The Dragon (1973) BRrip 360P 350...
Photoshop အတွက် အသင့်သုံး 3D Text PSD
Hippo Animator 4.4.5714+Keygen Full Version
The best Android app tinyCam Monitor PRO.Apk
Internet Download Manager 6.23 Build 20 +Crack Ful...
English Idiom and Phrases For Android
Falcon Rising 2014 BRrip 750MB
ဖုန်းဂိမ်းတွေကို ကွန်ပျုတာမှာဆော့ကစားနိုင်မယ့်- No...
ဖုန်းအ၀င်လင်းတဲ့ LED မီးကာလာချိန်းပေးနိုင်တဲ့ - Li...
ဖုန်းမှာ Music တွေကိုအကောင်းဆုံးနားဆင်နိုင်မယ့် - ...
Pacific ဒေသကိုလေယာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ့်ဂိမ်းလေး - T...
၀ူခုန်း(မျောက်ဘုရင်) ဂိမ်းကောင်းလေး - Wu Kong: Mon...
UFC ဖိုက်တင်ချန်ပီယံတွေထိုးသတ်တဲ့ဂိမ်းလေး -EA SPOR...
ဖိုက်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး -Angel Sword APK V1.0.1 MOD...